Hadaaftimo, 12 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
KEYDMEDIA OO BILILIQAYSATAY BARNAAMIJYO UU LEEYAHAY IDAAJAA.
Beryahan danbe waxaa caadi noqotay in qoraal ama hadal qof yiri layska qaato iyadoo aan ogolaansho laga qaadan qofkii iska lahaa. Soomaalidana caado iyo dhaqan ayayba u noqotay inay iska qaataan wax qof kale ku tabcay iyagoo weliba ku dacwoonaya inay iyagu iska leeyihiin.
Arintan sheegashada wax aadan lahayn kuma koobna gurha iyo beeraha laakiin waxaa la mid qoraalada, sheekooyinka, heesaha.iyo wax kastoo qof gaar u lahaa laakiin laga daba qaatay loona diidey in la xuso qofkii lahaa.
Sanadkii 1988kii waxaa ugu horeeyey musharixiinta xisbiga Dimoqraadiga ee Maraykanka ninka hada madaxweyne ku xigeenka ah ee la yiraahdo Joe Biden, wuxuuse eeday oo laga raacay markii uu hadalkiisii ku soo daray sadex layn oo uu ka soo qaatay hadal uu hore u yiri nin Ingiriis ahaa oo la oran jirey Neal Kinnock, arintaas oo Biden ilaa hada ka qoomameeyo waxay tirtirtey rajadii uu ka lahaa inuu madaxweyne ka noqdo Maraykanka.
Waxaa kaloo iyana yaab leh Kayd Media oo qaadatay sheekooyinkii Axmed Faarax Cali Idaajaa, ka dibna iyagoo aan hal erey ka bedelin sidoodii u soo geliyey. Websaytyada Soomaalida iyagu ceeb umaba yaqaanaan inay koobigareeyaan qoraal ay ka soo qaateen websayt kale
Halkan kala akhriso ama ka dhegeyso wixii dheeri ah:
Dalmar Riixdan AlMakhzuumi